သစ်မွှေးဆိုတာ ဘာလဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သစ်မွှေးဆိုတာ ဘာလဲ?
Posted by Wai Aung Chan Myo on Jan 30, 2012 in Copy/Paste | 10 comments
သစ်ပင်အသားထဲမှ အမွှေးနံ့ထွက်သောအပင် မဟုတ်ပါ။
သဘာဝအရ အပင်အခေါက်တွင် ဒဏ်ရာရရှိပြီးနောက် မှိုတစ်မျိုး စွဲကပ်ရာမှ အပင်အတွင်းမှ Anti-body တစ်မျိုး ထွက်လာပြီး ထို မှိုကို တိုက်ခိုက်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆီခဲ ဖြစ်တည်နေသည့် အပင်ကို ဆိုလိုသည်။
သဘာဝအားဖြင့် အပင် ၁၀ပင်တွင် ၁ပင် ဖြစ်ခဲပြီး ဖြစ်နိုင်သည့် သက်တမ်းမှာလည်း အနည်းဆုံး နှစ် ၃၀ မှ ၅၀ မှသာ ဖြစ်တည်နိုင်သည်။ သဘာဝအားဖြင့် ရရှိသော အဆီခဲမှာ 1 Kg လျှင် ကမ္ဘာဈေးကွက်တွင် USD 30000 မှ အထက်ရှိသည်။
နောက်တနည်းမှာ Artificial Inoculation ခေါ် သဘာဝကို တုပ၍ ဆေးထိုးသွင်းခြင်းကို ယခု တိုးတက်လာသော နည်းပညာအရ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။
သစ်မွှေးပင်ကို အစေ့မှစ၍ စိုက်ပျိုးနိုင်သော်လည်း အလွန်လက်ဝင်သည်။ ၁၀ပင် တွင် ၅ပင်ရှင်ရန် အတော်ပင် ပြုစု ပျိုးထောင်ရသည်။ ပျိုးပင်များဝယ်လျှင် အနည်းဆုံး ၁၀လသားခန့်ရှိမှသာ အဆင်ပြေနိုင်ပြီး ၁နှစ်သားအရွယ်မှာ မြေချစိုက်ပျိုးရန်သင့်တော်သည်။ ရေ၀ပ်ခြင်းကို မနှစ်သက်သော်လည်း ရေကို အလွန်ကြိုက်သည်။ အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသွားမည်ထင်၏။ ရေမ၀ပ်သော ရေဆင်းကောင်းသောမြေကို နှစ်သက်၏။ ရေကို နှစ်နှစ်သားအထိ ၂ရက်၁ကြိမ် (ပူလျှင် ၁ရက်၁ကြိမ်) လောင်းပေးရသည်။ နှစ်နှစ်သားအရွယ်တွင် အမြစ်သည် သူဘာသာ ရေစုပ်ယူနိုင်၍ ရေကို လျော့လောင်းနိုင်သည်။ မြေသြဇာကို မိုးဦးနှင့် မိုးနှောင်းတွင် ကျွေးရမည်။
၂နှစ်သားကျော်လွန်လျှင် သဘာဝဒဏ်ခံနိုင်သွား၍ (ပျိုးပင် ၁နှစ်သားဝယ်ယူလျှင်) ၁နှစ်ခန့်သာ ပြုစုရန်လိုအပ်သည်။ အနည်းဆုံး ၃နှစ်သားမှ စ၍ ဆေးစထိုးနိုင်သော်လည်း အဆီထွက်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာ ၇/၈နှစ်သားတွင်ဖြစ်သည်။ ဆေးထိုးမှုကို ပြည်တွင်းမှာပင် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး (တစ်ချို့သောကုမ္မဏီများက ရောင်းရငွေ၏၂၅%၊ ၃၀% စသဖြင့် ယူကြသည်။) ဆေးဖိုးနှင့် ထိုးခမှာ အမှန်တကယ်အားဖြင့် ၅၀၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀၀ ခန့်သာ ကုန်ကျသည်။ သစ်မွှေးအဆီခဲ ပေါင်းခံခြင်းကိုလည်းကို ပြည်တွင်းမှပင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အပင် ၇နှစ်သား(ဆေးထိုးပြီး+အဆီထုတ်ပြီး) ၏ တန်ဖိုးမှာ အနည်းဆုံး သိန်း ၂၀ မှ ၃၀အထိ ရရှိနိုင်သည်။
ပျိုးပင်ပေါက်များအနေဖြင့် ၁ပင်လျှင် ၅၀၀ မှ ၂၅၀၀ အထိရှိသည်။(၁လသား မှ ၁နှစ်ခွဲသားအထိ)
အကြံပြုလိုသည် တစ်နှစ်သားအရွယ် ၂ပေမှ ၃ပေဆိုဒ်များသည်သာ မြေချစိုက်ပျိုးရန်သင့်တော်သည်။
တစ်နှစ်အောက် အရွယ်မှာ နုနယ်တဲ့အတွက် တော်တော်ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ တစ်နှစ်ကျော်သွားရင် ဒဏ်တော်တော်ခံနိုင်သွားလို့ မြေချစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအချက်တွေဟာ အပင်ရောဂါရပြီး ပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းတွေထဲက တချို့ဖြစ်ပါတယ်။
၁) အပင်သက်တမ်း နုသေးချိန်မှာ မြေချစိုက်မိခြင်း။
၂) စိုက်သည့် အချိန်မှာ အခြားလများထက် အအေးပိုသော ဆောင်းတွင်းဖြစ်ခြင်း။ (သစ်မွှေးမှာ ဆောင်းတွင်းတွင် အမြစ်ကျဉ်ရောဂါ၊ အမြစ်မှိုကျရောဂါတို့ဖြစ်တတ်သည်။)
၃) ရေသိပ်မဆင်းသော မြေဖြစ်နိုင်ခြင်း။ (slope နည်းခြင်း)
၄) အပင်များကို ရေလောင်းချိန်နှင့် ပမာဏ မမှန်ကန်ခြင်း။ (အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်တွင် ညပိုင်းမှာ အအေးအလွန်ပိုတတ်သဖြင့် ရေကို ၈နာရီမှ ၁၀နာရီကြားလောင်းသင့်ပြီး မနက်ခင်း သိပ်အစောကြီး မလောင်းမိပါစေနှင့်။ ညနေပိုင်းသိပ်နောက်ကျမှလောင်းပြန်လျှင်လည်း အမြစ်ကျဉ်တတ်သောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်ကို ချင့်ချိန်ပြီး ပမာဏကိုလည်း လိုသလို ထိန်းလောင်းသင့်သည်။)
အဲဒီတော့ အဲဒီလို စိုက်ပြီးသား အပင်တွေမသေအောင် အကြံပေးရရင်တော့ အပေါ်အချက်တွေကို သတိထားဆင်ခြင်ပြီးလုပ်ဖို့ရယ်။ နောက် အပင်ငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ၁နှစ်၊ ၁နှစ်ခွဲ မကျော်မချင်း နဲနဲဂရုစိုက်ရမယ်။
– အရမ်းပူလွန်းရင် နေရှိန်ပြင်းလွန်ရင် အရိပ်လိုတယ်။ အေးလွန်းရင် နေရောင်လိုတယ်။ သူက အဲဒီလိုမျိုး။ ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်ပြီး လိုသလိုညှိပေးဖို့လိုတယ်။
– ရေကို ကြိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် လောင်းထားတဲ့ရေက ၃၊၄နာရီနေလို့မှ ရွှဲနေသေးရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူး။ (ရေ၀ပ်တာကို မကြိုက်ဘူးပေါ့)
– မြေသြဇာအနေနဲ့က တော်တော်များများကတော့ ပုလဲတို့ တီစူပါတို့ စသဖြင့် ဓာတ်မြေသြဇာကို သုံးကြတယ်။ ကျနော်လည်း အစက သုံးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၊ ၄လက စပြီး ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဖော်စပ်ထားတဲ့ သဘာဝမြေဆီနဲ့ ရွက်ဖြန်းဆေးကို ပဲသုံးတာ၊ ပိုးကျသက်သာတာရော၊ အပင်ကြီးထွားလာတာရောက တော်တော်သိသာပါတယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာအလွယ်တကူ ရှိတဲ့ (ဈေးလည်းသက်သာတဲ့) နည်းပါ။ ထမင်းအချဉ်ဖောက်ရည်တို့၊ သစ်သီပုပ်အချဉ်ဖောက်ရေတို့ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒီနည်းက လက်တွေ့အလွန်ကျပြီး အကုန်အကျလည်းသက်သာ၊ အပင်လည်းဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားပြီးရောဂါပိုးလည်း ကင်းစေတဲ့နည်းပါ။
အဆီထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကျယ်တ၀င့် ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။ တခြားသိချင်တာတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။
နည်းပညာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး share လုပ်ချင်တဲ့ သဘောပါ။
သစ်မွှေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တကယ်စိတ်ဝင်းစားပြီး လေ့လာချင်သူ မည်သူမဆို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယခုလိပ်စာ- အမှတ် (၁၉)၊ အောင်ချမ်းသာလမ်း၊(အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံအနီး) စမ်းချောင်းမြိုနယ်၊ ရန်ကုန်။
သိပ်ဟုတ်တာပေါ့ သိပ်မှန်တာပေါ့ ( ကြည့်ပြီးလုပ်ပေးမှာပါ )
About Wai Aung ခင်ဗျား
ကျေးဇူးပြုပြီး ခင်ဗျားအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရှိလဲ ပြောပါ
( ဒီရွာထဲမှာပွဲစားမတစ်ယောက်ပြောဘူးပါတယ် )
ခင်ဗျား … အမှန်အကန်သတ္တဝါဆိုရင် ဒေသနဲ့ မြေဂရမ်ကိုပြောရင် ရပါပြီ
ကြုံလို့ သတိပေးပါမယ် သူများချိန်းတိုင်းခြံထဲလိုက်မသွားနဲ့ဦး
သစ်မွှေးပင်အောက်မှာ ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ် အမြုပ်ခံနေရဦးမယ်
တစ်ကယ်ဆို လူတွေက အယူမှားနေတာ
သေသွားတဲ့လူသေကောင်တွေကို သူ/ငါ မတွက်ဘဲ အုန်းသီးပင်အောက်မှာမြုပ်ကြည့်
နောင်လာနောက်သားတွေကို အမွေပေးချင်ရင် သစ်မွှေးစိုက်ရမယ်ထင်တယ်..
အဲအချိန်ကျမှ နည်းပညာတွေမြင့်ပြီး ပေါချင်းသောချင်းဆိုရင်တော့ တေဘီချရာပေါ့.
တွေ့ ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်..
အပေါ်က ဂေါ်ဇီလာဖင်တော့ မသိစေနဲ့ ..အာရုံနောက်လို့ 
အခုလောလောဆယ်တော့ ၊ ကိုယ့်လက်ရှိအခြေအနေအရ သစ်မွှေးဘက်ကို မလှည့်နိုင်သေးဘူး ။ ဒါပေမယ့်
ကိုဝေဖြိုး ရေးပြပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ စီးပွားရှာချင်သူများအတွက် တစ်ကယ်အကျိုးရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေမို့ တစ်ကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ တစ်ချိန်ချိန်ကြလို့ ၊ သစ်မွှေး စိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုဝေဖြိုးကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်နော် ။
အခုလို လိုအပ်တာတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရေးပေးတာ ကောင်းပါတယ်။
ဆူး ရေးတဲ့ ပိုစ်ထဲမှာ ၀င်ရောက်အားဖြည့်ခဲ့ပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ကျနော် ဒီ သစ်မွှေးအကြောင်းတွေ တော်တော်များများနဲ့ သဘာဝ စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။
လာရောက်အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော်ဆိုဒ်ကို ၀င်ကြည့်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
နောက် သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကြုံရင် သစ်မွှေးအကြောင်း် သတင်းစကားပါးပေးပါအုံးလို့
ကိုဝေအောင်ခင်ဗျာ…ကျနော်သိချင်လေးတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်၊ကျနော့်ရဲ့ အသိမိတ်ဆွေတစ်ဦးက သူရဲ့ (၁၀)နှစ်သက်တန်းရှိ သစ်မွှေးပင်ရှိပါတယ်၊ ရောင်းလဲရောင်းချင်ပါတယ်၊အကယ်၍ ၀ယ်လက်ရှိမည်ဆိုပါက ဆက်သွယ်ချင်ပါသည်၊အပင်က ချင်းပြည်နယ်ကလေးမြို့နားမှာပါ။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်၊သန်လျင်ဘက်မှာ မြေ၀ယ်ပြီးစိုက်ပျိုးချင်ပါတယ်၊အပင် တစ်ရာ လောက်စပြီးစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင် မြေအကျယ်မည်မျှလိုအပ်ပါသလဲခင်ဗျာ…စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်မည်မျှလောက်ရှိပါသလဲခင်ဗျာ…ကျနော့်ရဲ့ မေးလ်ထဲမှာ ဖြေကြားပေးလဲရပါတယ်…
Email: minmaung9@gmail.com ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….
ကိုဇော်မင်းရဲ့အဖြေကို ကျနော် gmail နဲ့ပို့လိုက်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူးလေ။သစ်ပင်စိုက်တာ ဝါသနာပါရင် အချိန်တော့ကြာတတ်ပါတယ်။နှစ်ကြာမှ ငွေပြန်ထွက်မယ့်
အလုပ်ကြောင့် စိတ်ကူးနဲ့ ရူးတဲ့ သူဌေးတွေ မွဲသွားတာမနည်းတော့ပါဘူး။သစ်မွှေးကို စိတ်ဝင်စားပေမယ့် လောလောဆယ်
ကျနော်က ကျွန်းပင်လေးတွေ၊ပျဉ်းကတိုးပင်လေးတွေဘဲ တနိုင်စိုက်နေပါတယ်။ခုတော့ ကျွန်းပင် ၂၀၀၀ လောက် ရှိထားပါ
ဟုတ်ကဲ့ comment ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
တသက်တာစိတ်ချမ်းသာချင်ရင် သစ်ပင်စိုက်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ သစ်ပင်စိုက်ခြင်းဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ ကောင်းနေပါပြီ။ တကယ်တော့ သစ်မွှေးစိုက်ခြင်းဟာ စိတ်ကူးနဲ့ရူးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရေရှည်စီမံကိန်းတခုပါပဲ။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအားဖြင့် မြေရှိနေသူအဖို့ သိပ်စိုက်စရာမလိုတဲ့အပြင် နှစ်တိုအတွင်း ၀င်ငွေရရှိစေပါတယ်။ သစ်မွှေးကို အနည်းဆုံး ၃နှစ်သားမှာပင် အဆီထုတ်နိုင်ပြီမို့ ၃နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာ ကျွန်းစတဲ့အပင်နဲ့ယှဉ်ရင် အလွန်ကို နည်းလွန်းပါတယ်။ ရာဘာလောက်ပြုစုယုယစရာ မလိုတဲ့အပြင် ၀င်ငွေကလည်း ၁၀နှစ်အတွင်း ၃ဆမှ ၄ဆထက်ပိုများတာကြောင့် နှိုင်းယှဉ်ဖို့တောင် မလိုပါဘူး။ အကို စိတ်ဝင်စားရင် ကျနော့်မှာ သစ်မွှေးနဲ့ ကျွန်းပင်၊ သစ်မွှေးနဲ့ ရာဘာ စသည်တို့ရဲ့ အမြတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ ဇယားရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး သစ်မွှေးရဲ့ကမ္ဘာ့လိုအပ်ချက်က အနည်းဆုံး နောင် နှစ် ၁၀၀အထိ တိန်ကောဖို့မရှိပါဘူး။ လူတွေ အမွှေးနံ့သာတွေ မက်မောနေသေးသရွေ့၊ ရောဂါတွေ ထူပြောနေသေးသရွေ့ သစ်မွှေးလိုအပ်ချက်က ရှိနေအုံးမှာပါ။
နည်းပညာ၊ အသိပညာကို ဖလှယ်ခြင်းပါ။ စကားပြိုင်လုပြောခြင်းဟု မမှတ်ထင်စေလိုပါ။